Kismaayo News » Soomaaliya oo loo diiday ku biirista dalalka Afrikada Bari
Soomaaliya oo loo diiday ku biirista dalalka Afrikada Bari
Kn:Codsi ay dawladda Soomaaliya u dirsatay inay ku biirto dalalka ku bohoobay Afrikada Bari ayaa noqday mid aan dhag jalaq loo siin.
Kenya, Uganda, Tanzania, Ruwanda iyo Burundi ayaa ah xubnaha joogtada ah ee dalalka ku bohoobay Bariga Afrika (EAC), laakiin Soomaaliya iyo Koonfurta Suudaan ayaa codsi u dirsaday ay kaga mid noqonayaan waxayna la kulmeen diidmo cilmiyaysan.
Soomaaliya nabadi ma taalo, Koonfurta Suudaanna horumar dhinaca jididka iyo dhismayaasha ahi kama jiraan, dhulkana waxaa la beeraa wax boqolkiiba 3 ka yar, kuwaasi waa shuruudaha loo cuskaday diidmada ku biirista.
Ujeedada ugu balaaran ee isu taga dalalka Bariga Afrika ayaa ku aadanaa dhinaca ganacsi xor ah oo dhex mara, socdaalka iyo waliba mustaqbalka oo ay yeeshaan hal lacag oo ka dhaxaysa. Haatan waxay ku talo jiraan inay dhanka siyaasaddana ku bahoobaan.
Shalay iyo maanta waxaa magaalada Aruusha ee dalka Tanzania ka socday xaflad lagu furay aqal ay dawladda Jarmalku maalgalisay oo loo dhisay isutagga dalalka ku bahoobay Bariga Afrika. Madaxweynaha Kenya, Moi Kibaki oo gudoomiye u ahaa ayaa xilka ku wareejinaya madaxweynaha dalka Uganda, Musaveni.
Codsiga Soomaaliya waxaa la diray horaantii sanadkan, waxaana dirtay dawladdii ku meelgaarka ahayd ee Sh. Shariif garwadeenka ka ahaa, halka Koonfurta Suudaan ay buuxsatay codsiga xagaagii aan soo gudubnay.
Ururka EAC, waxaa markii hore la aas-aasay 1967, wuxuuna salka dhulka ku dhufta oo kala tagay 1977, kadib markii ay ku heshiin waayeen kaligood talisyadii dalalka kala maamulayay. Sanadkii 2000 ayaa dib loo yabyabay, sida qorshohoodu yahayna waxay rabaan inay samaystaan nidaam Federaal ah oo ay ku midoobaan sanadka 2013-ka.